Yenza ii-ollies kunye neendlela ezininzi zokuqhuba ngebhodi skateboard yakho kwi-Epic Skater 2 | Zonke iinkonzo ze-intanethi
UTony Hawk ngumdlalo we skate kwaye I-Epic Skater 2 umdlalo onokuthi ubonise ubukrelekrele bakhe. Ngaphezulu kwazo zonke ii-ollies, njengalezo zinzima zokuzenzela abo bangakhange bangene ebhodini.
I-Epic Skater 2 isisa kumdlalo wokuzonwabisa kunye nomdla we-arcade simulator yomdlalo weskateboarding. Ngaphezu koko kwiindidi zeentshukumo kwaye nenyani yokuba kuya kufuneka sizisebenzise kumanqanaba ahlukeneyo. La manqanaba aya kusinyanzela ukuba senze uthotho lweendlela zokufumana amanqaku aphezulu. Masihambe nge-Epic Skater 2, ngaphezulu kokuzonwabisa kwe-arcade simulator ye-Android yakho.
1 Funda iindlela ezahlukeneyo
2 Ukuphucula izixhobo zakho kunye nezakhono nge-Epic Skater 2
3 Umdlalo we-skate ongenanto
Funda iindlela ezahlukeneyo
I-Epic Skater 2 ekuqaleni isibeka phambi kothotho lwezifundo ukuze sikwazi ukuhamba Ukwazi iindlela ezahlukeneyo esinokuzenza kunye nebhodi yethu ebabazekayo. Ukusuka kwezo pollies ukuya kutshintsho olungalindelekanga lokuwela kwibar kunye nesilayidi ngobuchule kunye nomlinganiso.
Njengoko sifunda ngeentshukumo ezahlukeneyo, siya kuyazi ukuba sizisebenzisa njani ukufikelela kuzo fumana zonke ezo ngqekembe eziya kuthi zisivumele ngezixhobo ezingcono. Nangona, ngaphezulu kwako konke, eyona nto ibalulekileyo kukwazi ukuwagqiba la manqanaba aya kuthi abeke kuvavanyo konke esikufundileyo.
Ngesi sizathu, kubalulekile ukulandela amanyathelo kwinqanaba ngalinye ukuze wazi indlela yokuhamba ngayo, kuba, kungenjalo, siza kugwetywa. Olu lolunye lweempawu ezintle ze-Epic Skater 2, ukusukela oko yonke into esiyifundileyo kuya kufuneka siyazi ukuba siyisebenzisa kanjani ngendlela engaphezulu okanye encinci yasimahla; ubuncinci ukuba sifuna ukukhetha ukufumana awona manqaku aphezulu.
Ukuphucula izixhobo zakho kunye nezakhono nge-Epic Skater 2
Kwaye inokuba yeyiphi enye into kolu hlobo lomdlalo, kunye neengqekembe esiza kuzifumana sinokukhetha ukuphucula izakhono zombini njengeqela esinalo. Oku kuyakwandisa ubomi be-Epic Skater 2 ukuze ukwazi ukukhetha abaxhasi abakuvumela ukuba ufumane amabhaso angcono.
Ngezixhobo ezingcono kunye nezakhono eziphuculweyo, siya kwenza ukuba ezo meko okanye amanqanaba kube lula ukuwugqiba. Kwaye ngokuqinisekileyo ayingabo bonke abadlali abathanda ukutya ikhokhonathi encinci Ngeemfuno ezahlukeneyo ekufuneka kuhlangatyezwane nazo ukugqibezela imeko, kodwa abo bathanda inkululeko kancinci, nge-Epic Skater 2 baya kuba nexesha elimnandi.
Ngokukodwa kuba baya kufuneka phucula ezo ndlela kwaye ulandele isekethe i-Epic Skater 2 esibekele yona ukuba siqhubele phambili. Ezi meko okanye amanqanaba ayilwe kakuhle kwaye ayizukuba lula konke konke, ke ukuba ubulindele umdlalo oqhelekileyo apho ucinezela amaqhosha amabini kuphela, esi sihloko asisiyaso.
Umdlalo we-skate ongenanto
Yisebenzise ke ukwazi iimeko ezahlukeneyo ze-Epic Skater 2 ukufumana awona manqaku aphezulu kwaye ufumane iingqekembe ezingaphezulu. Njengoko besitshilo, eyona nto intle kukufumana umxhasi okunyanzela ukuba unxibe iihempe zabo ukuze ufumane isibonelelo esibalulekileyo. Kwimeko yexeshana uyakufumana ukuxhonywa kwe-Epic Skater ukuba ibe yenye yemidlalo oyithandayo.
Y ukuba ungumthandi webhloyibhodiNokuba ingumlandeli, ngokuqinisekileyo iya kukuxhoma ngokwaneleyo ukuba uyonwabele iiveki. Ekuqondeni kwezobuchwephesha sifumana amanqaku aqinisekileyo njengoyilo lwayo, oopopayi bohambo ngalunye kunye nobuhle bokuba ukuba uyasilela ukwenza i-ollie, uyakufumana ubuso bakho butyibilika emhlabeni. Nika ingqalelo kwiitempo zokutsiba ngalunye ukuze ube yimpumelelo phambi kwabo.
I-Epic Skater 2 ngumdlalo olungileyo weskate etsala ngaphezulu ukuya kwi-arcade, nangona inika inkululeko eyimfuneko yokugqiba onke amanqanaba. Uya kuba nenketho yokudlala ngokukhululekileyo, nangona olona lonwabo luphulo. Umdlalo okhululekileyo kwiVenkile yokuDlala kuGoogle kunye nee-micropayments zayo ezingenakuphepheka. Ukuba into yakho i-skateboarding, ungaqala ukuyinika.
Iindlela zakhe zokubaleka
Akukho lula ukugqiba isifundo
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Imidlalo ye-Android » Lingisa uTony Hawk ngebhodi yesikeyiti kwi-Epic Skater 2